Umasipala akakayilungisi inkinga yezintambo zikagesi ezashoka izingane | News24
Focus on Ramaphosa as brand ANC suffers
Cyril Ramaphosa's presidency shows that we might as well shift towards the presidential system because the current electoral system is not working, writes Ralph Mathekga.
Umasipala akakayilungisi inkinga yezintambo zikagesi ezashoka izingane
Cape Town – Izakhamuzi zasePhilippi East zibhikishe ngaphandle kweCape Town Civic Centre ngoLwesibili zinxusa umasipala ukuba alungise izigxobo zikagesi emgwaqeni ngemuva kokulimala kwezingane ezimbili ngoNovemba.
Lezi zakhamuzi zifuna nokwazi ukuthi luhamba kanjani uphenyo mayelana nalesi sigameko. ULindani Madolo, 6, nomfowabo uLuniko, 5, bashokwa yizintambo zikagesi emijondolo yaseThabo Mbeke ePhilippi East ngomhlaka 1 Novemba.
OLUNYE UDABA:Abathandi bebhola bashokhwe ugesi bashona bebuke umdlalo
Umama walezi zingane uViwe Madolo ubeyingxenye yalaba abebebhikisha.
Lo mama utshele abeGroundUp ukuthi ubengakaze azwe lutho kusukela kumasipala. “Akukho abakwenzile,”kusho yena.
Uthi uthole uxhaso kuphela kusukela kumalungu omphakathi.
UMholi womphakathi uBuzwe Kali uthe izakhamuzi zisaba ukuthi izingane zazo zizoshona. “Sesisemaholidini kaKhisimuzi manje, le ndawo iyaphithizela kakhuku nokwenza abantu bangaphephi,"kush” yena.
Oyilungu lukomiti leMeya, iKhansela u- Eddie Andrews, uthe abasebenzi emnyangweni kaGesi bazihlolile lezi zigxobo kanye nezintambo eziyinkinga.
Uthi lo monakalo uhambisana nalowo owenziwa yilabo abazixhumela ugesi ngokungemthetho futhi lokhu kwenziwa nayilabo abeba insimbi yecopha njengoba ibilahlekile nakulezi zigxobo.